2 TIMỌTI 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2TI 4)
2 TIMỌTI 4
Ya mere, ana m adụsi gị ọdụ ike nꞌihu Chineke na nꞌihu Kraịst Jisọs, onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe otu ụbọchị, mgbe ọ ga-abịa idozi alaeze ya, na-asị gị,
Ha agaghị ege ntị nꞌihe akwụkwọ nsọ na-ekwu, kama ha gaege ntị nꞌakụkọ na-enweghị isi.
Ma guzosie ike nọọ na nche mgbe nile. Atụla ụjọ ịhụ ahụhụ nꞌihi Onyenwe anyị. Rụzie ọrụ gị dị ka onye na-akpọtara Kraịst ndị mmadụ. Ahapụkwala ime ihe ọ bụla i kwesịrị ime.
Ana m ekwu okwu ndị a nꞌihi na site na mgbe na-adịghị anya ugbu a agaghị m anọkwa gị nso inyere gị aka. Oge ụla m eruola. Na mgbe na-adịghị anya site nꞌugbu a, aga m anọ nꞌụzọ ịla nꞌeluigwe.
Nꞌeluigwe, okpueze nke ezi omume dị na-eche m, nke Onyenwe anyị, onye naekpe ikpe ziri ezi ga-enye m nꞌụbọchị ahụ, ọ ga-alọghachi. Kama ọ bụghị nanị mụ onwe m ka ọ ga-enye okpueze ahụ, ọ ga-enyekwa ya ndị nile ga-eji ịhụnanya na-eche ọbịbịa ya.
Mee ọsịịsọ bịakwute m,
nꞌihi na Dimas onye hụrụ ihe ndụ a nꞌanya ahapụla m gaa Tesalonaika. Kresens agaala Galetia, Taitọs kwa agaala Dalmetia.
Ọ bụ nanị Luuku nọnyeere m. Mgbe ị na-abịa, kpọta Mak nꞌihi na achọrọ m ya ka ọ nọọ m nso.
Ezipụla m Tikikọs ka ọ gaa Efesọs.
Mgbe ị na-abịa, wetara m uwe m ji achụ oyi, bụ nke m hapụrụ na Troas nꞌaka Kapọs, wetakwara m akwụkwọ nile ahụ dị nꞌebe ahụ, nke ka nke akwụkwọ akpụkpọ anụ ahụ.
Alegzanda onye na-akpụ ọla emeela m ọtụtụ ihe ọjọọ. Onyenwe anyị ga-ata ya ahụhụ.
Kpachara anya nꞌebe ọ nọ, nꞌihi na o kwuru okwu megide ihe nile anyị kwuru.
Na mbụ mgbe a kpọtara m nꞌihu onye ikpe, ọ dịghị onye ọ bụla bịara nyere m aka, mmadụ nile gbara ọsọ hapụ m. Ekpere m bụ ka Chineke hapụ ịgụnyere ha omume a dị ka mmehie.
Ma Onyenwe anyị nọnyeere m, nyekwa m ohere iguzosi ike na-atụghị egwu ikwusa ozi ọma ka ụwa nile nụrụ. Ọ zọpụtara m, mee ka a hapụ ịtụnye m nꞌolulu ọdụm.
Nꞌezie, Onyenwe anyị ga-agakwa nꞌihu ịnapụta m site nꞌihe ọjọọ nile. Ọ gaakpọbatakwa m nꞌime alaeze ya nke eluigwe. Ka otuto dịrị Chineke ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Biko, keleere m Prisila na Akwila na ndị nile bi nꞌụlọ Onisiforọs.
Erastọs nọ na Kọrint, ma ahapụrụ m Trofimọs na Militọs nꞌọnọdụ ahụ esighị ike.
Biko, jisie ike bịarute nꞌebe a tupuu oge oyi eruo. Yubutọs na-ekele gị, ya na Pudins, na Lainus na Kodia na ụmụnna anyị nile.
Ka onyenwe anyị Jisọs Kraịst nọnyere mmụọ gị. Ka amara Chineke dinyere gị. Nọọ nke ọma.
2 TIMỌTI 4:1
2 TIMỌTI 4:4
2 TIMỌTI 4:6
2 TIMỌTI 4:8
2 TIMỌTI 4:9
2 TIMỌTI 4:10
2 TIMỌTI 4:11
2 TIMỌTI 4:12
2 TIMỌTI 4:13
2 TIMỌTI 4:14
2 TIMỌTI 4:15
2 TIMỌTI 4:16
2 TIMỌTI 4:17
2 TIMỌTI 4:18
2 TIMỌTI 4:19
2 TIMỌTI 4:20
2 TIMỌTI 4:21
2 TIMỌTI 4:22
2 TIMỌTI 1 / 2TI 1
2 TIMỌTI 2 / 2TI 2
2 TIMỌTI 3 / 2TI 3
2 TIMỌTI 4 / 2TI 4